raaxada siilka iyo naasaha yaa macaan | Gaaloos.com
Home » galmada » raaxada siilka iyo naasaha yaa macaan
raaxada siilka iyo naasaha yaa macaan
Sida lagu daabacey Majaladda MedicalDaily.com, Khubaro ku xeeldheer arrimaha xiriirka qoyska iyo arrimaha Galmada ayaa waxa ay ogaadeen in hurdada badan ee Dumarka ay kacsigooda ku kordhiso Boqolkiiba 14%.
Waxay khubaradani sheegeen in Haweenka la qabo ee dhalinyarada ah marka ay seexdaan habeenkii hurdo ku filan isla markaana ay si fiican u nastaan in uu siyaadayo kacsigooda rabitaanka galmada isla mar ahaantaana rabitaanka Galmadu uu xaggooda ku badanayo qiyaas ahaan Boqolkiiba 14 (14%).
Saacad kasta oo ku siyaadda hurdada haweenka waxay u kordhisaa rabitaan iyo dareen siyaado ah, sida daraasadan lagu xusay, iyadoo sidoo kale la sheegay in daraasadan lagu tijaabiyay 271 Dumar ah oo la qabo, waxayna socotay muddo labo toddobaad ah.
Haweynka hada joga ma jecla inta badan ninka guska weyn waayo dumarka hda jogaa ma ahan kuwo
sidaas u ad adag waa kuwa jil jilacsan oo ma jecla guska weyn waxaa ay ka jecelyhiin in loo raxeyo oo kaliya.
Title: raaxada siilka iyo naasaha yaa macaan